Raadinta Mashiinka Bixinta Outsource. Waa maxay waxa ku saabsan?
Outsourcing ma aha fikrad kale. Waxaa jirey waqti dheer oo qadarin ah, waxayna ka hadlaysaa qaddiyadda reer galbeedka. Sidee loo bilaabay dibadda?
Qiimaha lacagta ayaa ah kharashka ugu weyn ee urur kasta. Tan iyo markii ay Maraykanku billowday soo kabashada dhaqaalaha, rajada laga qabo raaxeysiga maalin kasta wuxuu bilaabay inuu horumar sameeyo si dhakhso ah. Maalmahan, warshad kasta oo guulo badani waxay isticmaashaa shaqaale firfircoon oo ka baxsan. Hagaajinta Webka waa isku mid sida qaabka uu u socdo istaraatijiyad isku mid ah.
3 Sababaha Mashruuca Nidaamka Goobidda Raadinta
Ka hor intaadan dooran inaad ka baxdo maareynta raadintaada raadinta, waa lagama maarmaan in la miisaamo faa'iidooyinka iyo khasaaraha. Waxyaabaha waxtarka leh
Webka dibadda wax yar ayaa ka duwan kala duwanaansho. Sababtoo ah webku waa nidaam caalami ah, waxaad sameyn kartaa dadaal badan si aad u hesho macluumaadka loo baahan yahay marka la eego ilbiriqsi. Marka aad dooranayso in aad ka bixisid tabinta raadinta raadinta, suurtagalnimada qiimaha iskudhaf la'aanta ayaa aad u yaraada.
Halkan, kharashka maamulka ayaa ka tarjumaya nooca shaqada. Ururada ka socda dalalka soo koraya waxay ku xirnaan doonaan awoodda ay ku siinayaan dib-u-celin sababtoo ah waxay ka soo horjeedaa rajada laga qabo raaxeysiga maalin kasta.
Khabiir arrimaha khibradda
Sida aan u qeexay, doorashada ugu fiican ee adiga ayaa ah inaad ka faa'iideysato maamulka hay'adaha heerka ugu fiican. Si kastaba ha ahaatee, qeyb weyn oo ka mid ah dadweynaha guud ma heystaan ​​lacag caddaan ah oo badan oo ku saabsan abuurista shirkad. Iyadoo ay ugu wacan tahay lacag la'aan, waxay u muuqdaan inay sameeyaan dejinta mashiinka raadinta iyagoo khatar ah.
Qodobo waaweyn Wakhti Wakhti
Marka loo eego farsamooyinka kale ee gaarka ah, waa nidaam waqti gaaban ah. Hay'ad kasta oo websaydh ahi waa inay leedahay xafiis kala duwan, oo kaliya maamusho nooca xayaysiinta. Hirgelinta adeegsiga SEO-yada waxay qaadataa waqti, laakiin waa u qalantaa.
Dad badan ayaa doorta in ay bilaabaan naqshadeynta website-ka ee guryaha oo loo tixgelinayo in ay noqdaan habka ugu wanaagsan ee dheer. Si kastaba ha ahaatee, mawduuca lacag caddaan ah ayuu ku jiraa.
Miyuu jiraa wax faa'iido darro ah oo ka yimaada SEO-ga?
Oo waxay yidhaahdaan, Maqsooyin ma leh. Xasilloonida marka la eego ururku waa dhibka kaliya ee aad la kulmi karto markaad bixiso SEO-gaaga. Waxaa laga yaabaa, waa waqtigii aad ka bixi lahayd raadintaada mashiinka raadinta Source .